प्रतिनिधि र प्रदेशसभामा २३ महिला निर्वाचित - Samata Khabar
प्रतिनिधि र प्रदेशसभामा २३ महिला निर्वाचित
काठमाडौं मंसिर २९
२९ मंसिर २०७४, शुक्रबार ०७:३३
प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचनमा २३ महिला निर्वाचित भएका छन् । महिला खबर
निर्वाचन आयोगका अनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्यमा वाम गठबन्धनबाट उम्मेदवार बनेका ६ र प्रदेशसभा सदस्यमा १७ महिला विजयी भएका हुन् ।
पहिलो चरणमा निर्वाचन भएको रुकुम पूर्व क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा कमला रोका विजयी भइन् । वाम गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्रबाट उम्मेदवार बनेकी रोक्का १० हजार ४ हजार ३४ मत ल्याएर विजयी भएकी हुन् ।
दोस्रो चरणमा वाम गठबन्धबाट उम्मेदवार पम्फा भुसाल ललितपुर क्षेत्र नम्बर ३ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा विजयी भएकी छन् । माओवादी केन्द्रकी नेता भुसालले २४ हजार ३७ मत ल्याएर विजयी भइन् । निकटतम प्रतिद्वन्द्धी नेपाली कांग्रेसका मदन अमात्यलाई १ हजार ७ सय ७ मतले पराजित गरेकी हुन् । अमात्यले २२ हजार ३ सय २९ मत ल्याएका थिए ।
कञ्चनपुर क्षेत्र नं १ को प्रतिनिधिसभा सदस्यमा वाम गठबन्धनबाट उम्मेदवार रहेकी माओवादी केन्द्रकी नेता बिना मगर भारी मतअन्तरले निर्वाचित भएकी छिन् । बिनाले प्रतिद्वन्द्वी नेपाली कांग्रेसका दिवानसिंह विष्टलाई १९ हजार २ सय ४८ मतअन्तरले पराजित गरेको निर्वाचन क्षेत्र नं १ का निर्वाचन अधिकृत गुणराज श्रेष्ठले जानकारी दिए । बिनाले ३८ हजार ४ सय ६७ र नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार दिवानसिंह विष्टले १९ हजार २ सय १९ मत प्राप्त गरेका थिए ।
यस्तै प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि एकमात्र क्षेत्र रहेको प्यूठानमा वामगठवन्धनकी उम्मेदवार राष्ट्रिय जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेलविजयी भएकी छन् । नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार प्रा.डा.गोविन्दराज पोखरेललाई भारी मतान्तरले पछि पार्दै दुर्गा विजयी भएकी हुन् । पौडेलले ४७ हजार ५ सय १४ मत ल्याइन् भने कांग्रेस उम्मेदवार राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेलले ३१ हजार २८६ मत पाए । प्रत्यक्षतर्फ जिल्लाबाट पहिलोपटक पौडेल विजयी भएकी हुन् । यसअघिका निर्वाचनमा महिला उम्मेदवार भएपनि विजयी हुन सकेकी थिइनन् ।
यस्तै स्याङ्जा क्षेत्र नं २ बाट प्रतिनिधिसभा तर्फ वाम गठबन्धनबाट नेकपा एमालेकी उम्मेदवार पद्मा अर्याल विजयी भएकी छिन् । उनले नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार एवम् उपप्रधानमन्त्री तथा शिक्षा मन्त्री गोपालमान श्रेष्ठलाई पराजित गदै विजयी भएकी हुन् । पद्माले ३५ हजार १ सय ४१ मत ल्याएकी छिन् भने श्रेष्ठले ३१ हजार ४ सय २५ मत ल्याएका छन् । अर्याल र श्रेष्ठको मतको अन्तर ३ हजार ७ सय ५ छ ।
झापा क्षेत्र नम्बर २ बाट नेकपा एमालेकी उम्मेद्वार पवित्रा निरौला खरेल १३ हजार ७ सय ६७ मतान्तरमा विजयी भएकी छन् । संयुक्त वाम गठबन्धनबाट उम्मेद्वार भएकी खरेलले ४५ हजार ८ सय १७ मत ल्याएकी छन् । यस्तै नेपाली कांग्रेसका उद्धव थापाले ३२ हजार ५० मत ल्याए ।
प्रदेशसभा सदस्यमा १७ महिला विजयी
पहिलो चरणको निर्वाचनमा म्याग्दीको प्रदेशसभा ‘ख’ बाट एमाले उम्मेदवार बनेकी नरदेवी पुन मगरले १० हजार ८ सय ६८ मत ल्याएर विजय भइन् । संयुक्त वाम गठबन्धनकी उम्मेदवार एमालेकी पुनले प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेसका अमलाल फगामीलाई पराजित गरेकी हुन् । फगामीले ७ हजार ९ सय ९० मत ल्याएका थिए ।
बझाङ प्रदेशसभा ‘ख’ बाट माओवादी केन्द्रकी उम्मेदवार देवकी मल्ल थापा विजयी भइन् । उनले १६ हजार ७ सय ४३ मत ल्याएकी छिन् । उनका प्रतिद्धन्द्धी नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार नरेश बहादुर सिंहले १४ हजार २ सय ४२ मत ल्याएका थिए ।
मकवानपुर प्रदेशसभा क्षेत्र नं १ को (क) बाट उम्मेदवार कुमारी मोक्तान विजयी भइन् । प्रतिद्वन्द्वी लोकतान्त्रिक गठबन्धनका यतिराज सापकोटा भन्दा १२ हजार ९ सय ९६ मत मोक्तानले ल्याएकी छिन् । २७ हजार १ सय ३२ मत ल्याइन् भने सापकोटाले १४ हजार १ सय ३६ मत ल्याएका छन् ।
यस्तै काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर ८ ‘ख’का प्रदेशसभा सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्य पाँच हजार १६९ मत ल्याई विजयी भएकी छिन् । प्रदेश नम्बर ३ को मुख्यमन्त्रीका दाबेदार शाक्य प्रतिस्पर्धी देवरत्न डङ्गोललाई एक हजार ५ सय मतान्तरले पछाडि पार्दै शाक्य विजयी भइन् ।
यस्तै काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १० ‘ख’ बाट एमालेकी रमा आलेमगर विजयी भएकी छन् । रमाले ९ हजार ९ सय ३ मत ल्याएकी छिन् भने प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेसका उम्मेदवार धर्मनन्द्र श्रेष्ठले ७ हजार १७ मत ल्याएका थिए ।
ललितपुर क्षेत्र नं. १ को (क) को प्रदेशसभा सदस्यमा लालकुमारी पुन विजयी भएकी छिन् । १२ हजार ८४१ मत ल्याएर पुन विजयी भएकी हुन् । निकटम् प्रतिस्पर्धी कांग्रेसका ऋषिराम घिमिरेलाई २ हजार ७३६ मत अन्तरले पराजित गरिन् । घिमिरेले १० हजार १ सय ५ मत पाएका छन् ।
तनहुँ क्षेत्र नं २ को ‘क’ बाट प्रदेशसभा सदस्यमा आशा कोइराला विजयी भएकी छिन् । वाम गठबन्धनबाट नेकपा माओवादी केन्द्रकी उम्मेदवार कोइरालाले नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार प्रदिप पौडेललाई ५ भोटको मतले पछि पार्दै विजयी भइन् । दुईबीचमा ५ भोटले अन्तर भएपछि धाँधली भएको भन्दै नेपाली कांग्रेस निकट कार्यकर्ताहरुले विरोध गरेका थिए । विवाद मिलाउन बसेको सर्वपक्षीय बैठकले मतगणनामा कुनै धाँधली नभएको निष्कर्ष निकालेको थियो । कोइरालाले १६ हजार ६ सय ४६ मत पाएकी छन् भने नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार प्रदिप पौडेलले १६ हजार ६ सय ४१ मत पाएका छन् ।
उदयपुर क्षेत्र नं.२ (ख) प्रदेशसभामा वाम गठबन्धनका साझा उम्मेदवार कला घले विजयी भएकी छन् । घलेले १३ हजार ४ सय ५९ मत ल्याएर विजयी भएकी हुन् । उनका निकटतम् प्रतिस्पर्धी कांग्रेसका रामकुमार खत्रीले ८ हजार ९ सय ७६ मत प्राप्त गरेका छन् । घलेले ४ हजार ४ सय ८४ को मतअन्तरले विजयी भइन् ।
यस्तै बारा क्षेत्र नम्बर ३ (क) बाट ज्वाला साह प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वा्िचत भइकी छिन् । नेकपा माओवादी केन्द्रबाट वाम गठबन्धनकी उम्मेदवार साह ११ हजार ७ सय ७१ मत प्राप्त गरेर विजयी भएकी हुन् । निकटतम प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेसका रामनन्द परसाद यादवले १० हजार १ सय ४७ मत ल्याए ।
महोत्तरी क्षेत्र नम्बर १ को (क) बाट प्रदेशसभामा नेकपा एमालेबाट वाम गठबन्धनकी उम्मेदवार शारदा थापा विजयी भएकी छन् । उनले १० हजार २ सय ८२ मत पाएकी छन् भने उनको प्रतिद्धन्द्धी नेपाली कांग्रेसका प्रल्हाद कुमार क्षेत्रीले ९ हजार ३१ मत पाए ।
प्रदेश नम्बर ५ बाट १३ हजार ४ सय ३६ मत ल्याउँदै नेकपा माओवादी केन्द्रकी नेतृ कृष्णा केसी (नमुना) पहिलो महिला प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वा्िचत भएकी छिन् । हालसम्मको चुनावी परिणाम अनुसार विजयी सबै महिलाहरु वाम गठबन्धनका छन् ।
सर्लाही क्षेत्र नम्बर १ (ख)बाट वाम गठबन्धनकी बेची लुङगेली विजयी भएकी छन् । लुङगेलीले नेपाली कांग्रेका शेष साह दुल्लाहलाई ६ हजार १ सय ६६ मतले पछि पार्दै विजयी भएकी हुन् । लुङगेलीले १५ हजार ३ सय ६३ मत ल्याएकी छन् भने उनका निकटतम प्रतिद्वन्दवी कांग्रेसका साह दुल्लाहले ९ हजार १ सय ९७ मत प्राप्त गरेका छन् । लुङगेली सर्लाहीको एक मात्र महिला विजयी उम्मेदवार हुन् ।
महोत्तरी २ ‘ख’ मा राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)का सुरिताकुमारी साहले १५ हजार ४४० मत ल्याएर विजयी भएकी छिन् । उनले नेपाली कांग्रेसका राजकरणप्रसाद साह सुढीलाई ८ हजार ६५० मतान्तरले पछि पार्दै विजयी भइन् ।
यसैगरी महोत्तरी ३ ‘ख’मा राजपाकै रानी तिवारी ७ हजार ४३० मत ल्याएर विजयी भइन् । उनले स्वतन्त्रका उम्मेदवार सुरेश साहलाई १ हजार ८३२ मतान्तरले पराजित गरेकी हुन् ।
नुवाकोटको प्रदेशसभा क्षेत्र नं. १ को प्रदेश क मा राधिका तामाङ विजयी भएकी छन् । तामाङले १८ हजार १ सय ३७ मत ल्याएकी छन् भने उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेपाली कांग्रेसका महेन्द्रबहादुर थिङले १३ हजार ३ सय ६८ मत प्राप्त गरेका छन् ।
त्यसैगरी बाँके १ ‘ख’मा वाम गठबन्धनबाट नेकपा (एमाले)की नेता आरती पौडेलले १९ हजार ३८९ मत ल्याएर विजयी भएकी छिन् ।
त्यसैगरी इलाम १ ‘क’मा वाम गठबन्धनबाट एमालेका खिनु लङवा लिम्बूले १८ हजार ६८६ मत ल्याएर विजयी भएकी छिन् । नेपाली कांग्रेसका देवेन्द्र राईलाई ९ हजार ३५९ मतान्तरले पछि पार्दै लिम्बू विजयी भएकी हुन् ।
प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको पहिलो चरणको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ विभिन्न राजनीतिक दलबाट ३६ महिला चुनावी मैदानमा उत्रिएका थिए । जसमा प्रतिनिधि सभातर्फ १६ र प्रतिनिधिसभाका लागि वाम गठबन्धनबाट ३ महिला प्रतिस्पर्धामा थिए ।
प्रदेशसभातर्फ चुनावी मैदानमा रहेका २० जना महिला मध्ये ६ महिला ठूला दलबाट थिए । यस्तै दोस्रो चरणको निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभातर्फ १ सय २६ र प्रदेशतर्फ २ सय ९ महिला उम्मेदवार थिए ।
प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा राजनीतिक दलले महिला उम्मेदावरलाई कम सहभागिता गराइएको भन्दै महिला नेताहरुले विरोध जनाउँदै आएका थिए । महिलाखबरबाट
स्वर्गीय पत्रकार एलबी विश्वकर्मालाई ‘सहयात्रा अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक न्याय सम्मान २०२२’
कारबाहीबाट जोगिन डिआइजी नवराज सिलवाल एमालेमा प्रवेश गरेको खुलाशा
रेशम चौधरीको रिहाइ सरकारको लेनदेनको विषय बन्न हुँदैन : राजकिशोर यादव
व्यावसायिक बन्दै कफी खेती